Waxaad ubaahantahay Khabiir Suuqgeynta Emailka Haddii ...
Waxaad ubaahantahay Khabiir Suuqgeynta Emailka Haddii If
Jimco, Janaayo 8, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Scott Hardigree
Qoraalkan waxaa loogu talagalay inuu u noqdo ilo loogu talagalay kuwa, sida la ogsoon yahay, ogaada inay ka heli karaan qiimo badan kanaalka emaylka. Macno malahan haddii aad go'aansato inaad shaqaaleyso xirfadlayaal dibadda ah, sida emaylka wakaaladda suuq geynta, ama tayada guriga; Tilmaamahan ayaa kaa caawin doona inaad qiimeyso oo aad dib u qiimeyso dadaalada suuqgeynta emaylka ee hadda jira.
Aynu eegno tirooyinka
Emailku wuxuu ahaa shaqadii suuqgeynta muddo toban sano ah, taasna uma badna inay beddesho mustaqbalka dhow. Waxay u oggolaaneysaa bartilmaameedka maxaa yeelay waa xog la waday. Waxay ku socotaa iibinta tooska ah. Waxay dhistaa xiriiro, daacadnimo iyo kalsooni. Waxay sidoo kale taageertaa iibka iyada oo loo marayo marinno kale oo toos ah:
Sida laga soo xigtay Ururka Suuqgeynta Tooska ah, iimaylka suuq geynta ayaa soo saaray ROI ah $ 43.62 doolar kasta oo lagu qarash gareeyo, taasi waa labalaab tii labaad ee ugu horeysay.
Soo koobitaan Suuqgeynta gobolada, Kuwa u arka waxtarka barnaamijyada emaylkooda oo yaraanaya waxay aad ugu dhowdahay inay yeeshaan aragtiyo aragti gaaban oo abaabul oo ku wajahan xeeladda. Ururada leh aragtida maalgashiga ee ku wajahan iimaylka ayaa guranaya abaalmarinta.
The Golaha CMOAragtida 'Suuqgeynta '08 Warbixinta waxay dib u eegis ku sameysay qorshooyinka iyo fikradaha 650 suuqley ah. Suuqgeynta iimaylku waxay ahayd aagga bartilmaameedka ugu sarreeya ee maalgashiga.
Sahaminta tafaariiqleyda, Dukaan.org ayaa sheegay in "E-mailka uu yahay taatikada guusha lagu xusay guud ahaan".
Maareysaa Suuqgeynta Emailka Guriga dhexdiisa?
Haddii aadan lahayn xiriir wakaalad jira ama aad leedahay karti ku filan gudaha, tixgeli tan:
Adiga (macnaheedu waa adiga ama kooxdaada) waad ogtahay ganacsigaaga; sidoo kale sifiican ugama baran suuqgeynta emailka?
Hadday haa tahay, ma haysataa waqti iyo tamar aad ku hagaajiso dadaalka?
Sidee suuq geyntaada isku dhafan iyo CRM isbarbar dhigayaan kuwa kula tartamaya?
Suuqgaynta emaylkaagu ma wadtaa iibka, ma dhistaa daacadnimo, oo ma dhimaysaa kharashyada suuqgeynta
Barnaamijka emailkaagu ma waxaa lagu aasaasay cilmi baaris iyo / ama xog taariikhi ah?
Shaqadaada gudaha ka mid ah miyey kuu keydineysaa ama lacag kuugu kacaysaa?
Durba Khabiir Ma Leedahay?
Haddii aad horey u laheyd wakaalad suuqgeyn ama caawimaad kale oo dibedda ah, is weydii:
Ma waxay ku takhasusaan emaylka ama iyaguba adeeg buuxa?
Miyay soo saaraan ROI kaas oo la jaan qaadaya natiijooyinka kor ku xusan?
Ma waxay naga fikiraan ayadoon la kicin?
Ma fahmayaan bartilmaameedkeenna suuqa iyo hannaanka ganacsiga?
Ma baareen oo ma lacag baayeen dhammaan xulashooyinka?
Shaqadoodu ma tahay mid cusub, mid xiiso leh, oo ka tarjumeysa dhaqamada ugu fiican?
Qeybaha Isle'egta Suuqgeynta Emailka
Suuqgeynta iimaylku waxay ku lug yeelan kartaa helitaanka macaamiisha, kobcinta hoggaaminta, dib-u-hawlgelinta macmiilka iyo haynta, iyo dabcan iibka tooska ah, taas oo macnaheedu yahay in hawlgallo iyo adeegyo badan ay ku lug yeelan karaan, oo ay ku jiraan:
Istaraatiijiyad & Cilmi baaris
Qorshaynta Tifatiraha & Xayeysiinta
Nuqul Qorista & Horumarinta Mawduuca
Naqshadeynta & Koodheynta
Qor Kobaca & Dhismaha Bulshada
Liiska Liiska & Liis gareynta Liiska
Dabeecadda & Macmiilka Aqoonsiga
Gaarsiinta Farriinta & Kormeerka Samatabbixinta
Isdhexgalka kanaalka iskutallaabta
Adeeg Bixiye Email (ESP) ama Qiimeynta Xalka Boosta ee Guriga
Quudinta Lead Lead & Direct / Up / Cross Cross
Tijaabinta Noocyada kala duwan & Ku-habboonaynta Barnaamijka
Haddii liiska kore uu koobayo wax ka badan intaad qabanaysid, tani waxay noqon kartaa tilmaan xoog leh oo aad ku hoos adeegsanayso kanaalkan macaashka badan. Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii lamaanaha suuq geynta cusub ama laga yaabee inaad u baahan tahay inaad dib u qoondeyso miisaaniyada iyo / ama aad siiso kooxdaada gudaha tababar dheeraad ah?
Haddii aad (si rasmi ah) u go'aansatay inaad u baahan tahay caawimaad, la soco. Qaybta labaad iyo tan ugu dambeysa waxaan ka wada hadli doonnaa SIDEE loo heli karaa loona qiimeyn karaa karti tayo leh oo ku habboon baahiyahaaga gaarka ah isla markaana buuxinaya xaddidaadaha miisaaniyadda.
Tags: golaha cmoisdhexgalka crmururka marekting directemaylka iyo tafaariiqdaiimayl crmisdhexgalka emaylkaEmail MarketingWakaaladda Suuq geynta Emailkaemail khabiir suuq geyntasoo celinta suuqgeynta iimaylka maalgashigahagaajinta emaylkaiimayl roiSuuqgeyntatafaariiqdashop.org
Scott Hardigree waa agaasime guud Indiemark, oo ah wakaalad suuq geyn iimayl adeeg buuxa leh iyo la talin ku saleysan Orlando, FL.
Scott waxaa laga heli karaa scott@indiemark.com.
Dhammaan Xirfadleyaasha SEO Looma Abuurin Siman
Falanqeynta Guud ee HTML 5
Jan 8, 2010 saacadu markay ahayd 3:10 PM
Scott - kani waa boostada aan ugu jeclahay taada ilaa maanta. Talo yaab leh! Shirkado badan ayaa la halgamaya ilaha ay haystaan ​​oo ma gaaraan inay gaaraan awooddooda. Taasi waa meesha iskaashiga khubarada had iyo jeer ay tahay go'aan weyn!
Jan 8, 2010 saacadu markay ahayd 3:41 PM
Mahadsanid Doug! Qaybta labaad waxaan ku qeexi doonaa 8 mabaadi'da hagida ah ee lagu shaqaaleeyo khabiir suuqgeyn email ah.